Rosiana State University ny Humanities - Lesona an-tany hafa
Rosiana State University ny Humanities
Rosiana State University ho an'ny Humanities Details
fanafohezan-teny : RSUH
mpianatra (eo ho eo.) : 30000
Aza adino ny iaraho midinika ny Rosiana State University ho an'ny Humanities
Misoratra anarana ao amin'ny Rosiana State University ho an'ny Humanities
ussian State University ny Humanities nitombo avy tany Moscou panjakana Institute for Tantara sy Archives. Ny ofisialy fitsingerenan'ny andro nahaterahany dia 27 March 1991.
Ny fihodinana voalohany ny Admissions ho any RSUH nitranga in 1991. Na dia eo aza ny tanora fampitahàna taona, RSUH Tonga ho iray amin'ireo tsara indrindra teo amin'ny oniversite hajaina indrindra ao amin'ny firenena, rehefa nivoaka toy ny mpitarika foibe fampianarana sy ny fikarohana ao amin'ny Rosia. Ny University no voalohany ao amin'ny firenena mba hanambatra ny teny hoe "Rosiana" sy ny "humanities" amin'ny anarany. Mirehareha isika ka nanaja ny mitondra anaram-boninahitra ity, miezaka mandrakariva ny manamafy bebe kokoa ny toe-. Ny fandrosoana no nataonay dia eken'ny roa ao amin'ny firenena sy ny any ivelany. Tamin'ny taona lasa rehetra RSUH no iray amin'ireo sough indrindra-aorian'ny andrim-panjakana teo anivon 'ny te ho mpianatra. Ary mahatsapa izahay fa tsy voatery mba hiarovana fotsiny fa koa mba hampitombo sy hampanan-karena ny lova izay no miditra ny fahatelo folo taona ny tantara.
University fanabeazana fitsipika:
Ny Eoropeanina roa-anivon'ny rafi-pampianarana (B.A. - M.A.) miharihary dia mampitombo ny isan'ny karazana fampiofanana sy manolotra ny fahafahana hianatra sy hiasa any ivelany.
Fampidirana fikarohana sy ny fanabeazana mamela ireo mpianatra mba hampivelatra fahaiza-manao fikarohana sy mahazo ny ilaina napetraka ny compétences.
Maharitra sy ny interdisciplinarity dia mifanitsy amin'ny fanabeazana ny miray saina sarotra izay mifanohitra amin'ny andian-manokana X-mifandray fandaharana.
Fampiharana-miompana fomba ny fanabeazana lalan'ny Mifototra amin'ny fitambaran'ny noforonina ny tsara ny fototra ara-pahalalana sy ny tanana-on fahaiza-manao.
Ny fanabeazana sahaza tontolo iainana dia ny fianarana, ary Mifototra amin'ny hevitra ny fahalalahana ara-mamorona sy tena matihanina-actualization sy ny fitsipiky ny fiaraha-mientana ifampizarana fandeferana.
Mpianatra-pampianarana mifantoka rafitra mamela nipaipaika ho any amin'ny olona fahaizana ny mpianatra. Ny University dia manana mpitaiza mavitrika rafitra.
Ny fiainana-ela fianarana hevitra mijery ny fampianarana ho toy ny dingana mitohy sy uninterrupting. RSUH Manome fampiofanana fiomanana ho an'ny te ho mpianatra, mitohy ny fandaharana fanabeazana ary koa ny nahazo diplaoma, ary nahazo diplaoma teny lalamby. Ny fandaharana miasa na tany Moscou sy tany amin'ny faritra.
Ny fitsipiky ny "fampianarana amin'ny alalan'ny kanto" no nitarika ny fananganana ny tontolo tsy manam-paharoa fampiofanana - nampianatra tao tranombakoka sy ny efitrano fampirantiana.
Institute for Tantara sy ny Archives
Division for Archival Fianarana
Division ho an'ny Archives sy ny Documentation Storage Teknolojia
Division for History, Siansa politika sy ny lalàna
Ny sekoly ambaratonga faharoa ny antontan-taratasy sy ny antontan-taratasy fandaharana ny Fitantanana
Institute for Tantara sy Philology
Division for Tantara sy Philology
Division for teorika sy Applied Linguistics
Institute for Toekarena, Management sy ny Lalàna
Division ny Toekarena
Fifandraisana iraisam-pirenena Division ny
Division for Social Psychology sy ny fanabeazan'Andriamanitra
Division ho an'ny Fanaovan-gazety
Institute for Information Siansa sy Security Technologies
Institute for tatsinanana sy Classical Fianarana
Division for bola ary
Division for Filozofia
Institute for Advanced Fianarana ny Humanities
Institute for Rosiana Tantara
“Rosiana Anthropology School” Institute
Social Anthropology Research sy Education Center
Vldimir S. Golenihchev Center ny Egyptology
Center for ny Fianarana ny Fivavahana
Rosiana-American Center Fianarana sy ny fikarohana ho an'ny Baiboly sy ny Jiosy Fianarana
Rosiana-American Center for American Academic Fianarana
Research Center for-fanabeazana sy ny fandroson'ny ara-pahalalana Programs Technologies
Rosiana-Swiss Center ny RSUH
Rosiana – Zavatra Center for Fanabeazana sy ny Fikarohana
Rosiana – Tiorka Fanabeazana sy Research Center
Ny Depatment Iraniana Fianarana
Sekoly nahazo diplaoma ny Eoropeana Kolontsaina
Ny College ny Humanities
Ny Art Design Center
Seza ny tantaran'ny scence
Moscow Public University, naorina in 1908 ny alalan 'ny fandraisana an-tanana ny Alfons L. Shanyavsky, ny fijangajangana Rosiana mpiaro ny kanto, Nandray anjara toerana manokana eo amin'ny fanabeazana Rosiana.
Hatramin'ny 1918, dia Rosia voalohany "maimaim-poana" anjerimanontolo foibe hanimba ny ara-fetra sy misokatra ho an'ny rehetra "mangetaheta ny tena fahalalana". Tsy ampiharina ny fitsipika miandalana ny fampianarana hafa izay mitohy amin'ny feo fototra misy akademika rehetra.
In 2012, Rosiana State University ho an'ny Humanities mankalaza ny 100faha tsingerintaona ny trano lehibe, izayan'i Moscow Public University teo anoloan'ny Rosiana ny Revolisiona 1917.
Moscow-panjakana Institute for Tantara sy Archives Niorina tamin'ny 1930 ho an'ny fampianarana tahiry fampiofanana manam-pahaizana manokana.
Nandritra ny taona maro dia tonga foiben'ny fikarohana akademika. Ao ny archival mikatsaka eo amin'ny sehatry ny tantara sy ny toy izany atỳ vondrona fanampiny araka ny loharanom-baovao fianarana ny Kilonga, Ny Arkeolojia sy palaeontology, dia niezaka ny miaro ny tena tsara indrindra tamin'ny fikarohana Rosiana fomban-drazana.
Ny fiandohan 'ny taona 1990 andrim-panjakana ity nahatratra ny haavon'ny "oniversite", izay mazava ho nahatonga azy ho tonga ny drafitra fon'ny RSUH, izay naorina tamin'ny 1991.
Maro RSUH departemanta dia hita manaraka isan-ny Kremlin. Tsy ara-bakiteny ao anatin'ny 5 minitra làlana. Noho izany ny mpianatra dia afaka mahazo Medieval RUS maritrano ary koa ny fitepon'ny fo indrindra amin'ny Moscow, ny arabe lehibe Tverskaya.
Rosiana State University ho an'ny Humanities dia iray amin'ireo mpitarika anjerimanontolo any Rosia. Miorina amin'ny fomba amam-panao tamin'ny taonjato maharitra, izany ihany koa ny fanapahana vonona amin'ny sisin'ny fanavaozana.
Ianao ve mila iaraho midinika ny Rosiana State University ho an'ny Humanities ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Rosiana State University ho an'ny Humanities amin'ny Map
Photos: Rosiana State University ny Humanities ofisialy Facebook
Rosiana State University ho an'ny Humanities Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Rosiana State University ho an'ny Humanities.